Madaxweynaha dalka Eriteeriya Isaias Afwerki oo safarkiisii ugu horeeyay ee Soomaaliya ku yimid Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha dalka Eriteeriya Isaias Afwerki oo safarkiisii ugu horeeyay ee Soomaaliya ku yimid Muqdisho
December 13, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo oo Afwerki kusoo dhaweynaya Muqdisho. [Isha sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Eriteeriya Isaias Afwerki ayaa maanta oo Khamiis ah safarkiisii ugu horeeyay ee Soomaaliya ku yimid Muqdisho.
Madaxweynaha Eriteeriya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay dhiggiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ammaanka Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay maanta iyada oo inta badan waddooyinka la xiray.
Afwerki ayaa ka qeybgali doona shirka saddex-geesoodka ah ee iskaashiga dhaqaalaha oo u dhaxeeya Soomaaliya, Itoobiya iyo Eriteeriya.
Shirka ayaa ka dhici doona Muqdisho iyadoo shirarkii ka horeeyay lagu qabtay dalalka Eriteeriya iyo Itoobiya.
Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isna la filayaa in uu soo gaaro Muqdisho.
TPEC oo ku dhawaaqday natiijada doorashada goleyaasha deegaanka ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa maanta oo Talaado ah ku dhawaaqay natiijada doorashadii dowladdaha hoose ee shalay ka dhacday degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Codadka la shaaciyay ayaa intooda waxaa [...]